Metrobus သတင်းသည် Avcilar နှင့် Beylikduzu ရှိအိမ်ရာစီမံကိန်းများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metrobus သတင်းမုဆိုးနှင့်Beylikdüzüအတွက်၎င်း၏လူနေအိမ်စီမံကိန်းကိုတိုးလာ
02 / 08 / 2012 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
အဆိုပါAvcılar-Beylikdüzü 2011 အဆိုပါ Metrobus လိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ပထမဦးဆုံးသတင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကတည်းကဒေတာ Sahibinden.co စီမံကိန်းကိုအရ, ဒါကြောင့်ခရိုင်နှစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ထားခံရဖို့အိမ်ရာစီမံကိန်းများများ၏အရေအတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကAvcılar-Beylikdüzü Metrobus လိုင်းအတွက်တစ်နှစ်နီးပါးနှင့်အစပျိုးစမ်းဘို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြုလုပ်ခြင်းသည်ခရိုင်အတွင်းရှိနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာလိုင်းသိသိသာသာသုည-လူနေအိမ်စီမံကိန်းများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တူရကီလျှောက်လုံး sahibinden.co စီမံကိန်းကိုအချက်အလက်များအရသိရသည်တစ်ခုတည်းကလစ်ရောက်ရှိကြောင်းတထောင် 800 ထက်ပိုသုည, လူနေအိမ်နှင့်ရုံးစီမံကိန်းများ, Avcılar-Beylikdüzüလိုင်းအတွက် Metrobus အချိန်အတွက် 2011 ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သတင်းများ၏နိုးထစပြုမည်နှစ်ခုခုအတွက်လူနေအိမ်စီမံကိန်းများ၏အရေအတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
အိမ်ယာစီမံကိန်းများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မုဆိုးနှင့်Beylikdüzüအလေးချိန်21 + တိုက်ခန်းအမျိုးအစားများတွင်တည်ရှိပါသည်။ +21 1 1 ယင်းတိုက်ခန်းများကိုကြည့်နေကြသည်။
ပထမဦးစွာလိပ်စာ sahibinden.co ကလူသုညပေါ်အိမ်ရာစီမံကိန်းကိုဝယ်ချင်
တူရကီ 800 တစ်လျှောက်လုံးအိမ်ခြံမြေလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းကလစ် access ကိုပေးစီမံကိန်းများပေါ်တယ်အတွက်တထောင်ကျော်စီမံကိန်းများကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူနိုင်ပြီးစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်, ငါ့ကြမ်းပြင် sahibinden.co ။ အဆိုပါပေါ်တယ်၏အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်မြေပုံပေါ်တွင်သူတို့အသုံးပြုသူများအလမ်းဆန်းစစ်နှင့်လမ်းပေါ်အသေးစိတ်မှဆင်းနိုင်, ဆန္ဒရှိစီမံကိန်းမှကျေးဇူးတင်စကား "ရှာရန် Maps ကို" ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအချက်အလက်များအရအများဆုံးအသုံးပြုသူများသည် Florya, Bakırköy, Zeytinburnu နှင့် Buyukada အတွက်သွားရောက်ခြင်းစီမံကိန်းများတွင်အကြှနျုပျ၏စီမံကိန်းများ sahibinden.co ။ အများဆုံးရှာသောအခါ-ပြီးနောက်လူနေအိမ်တိုက်ခန်းများနှင့် Villas ရှာဖွေမှုများကိုရှာဖွေရေးနောကျပေါ်တယ်အတွက်လူနေအိမ်တိုက်ခန်းများ, နေစဉ်။
အရင်းအမြစ်: www.aksam.com.t ဖြစ်ပါသည်
ကျော်သော်လည်းမAvcılarအတွက်မငြိမ်မသက်ကျော်Avcılar-Beylikdüzü Metrobus လိုင်း
မြို့တော်ဝန် Topbas အဆိုပါ Metrobus Beylikdüzüကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပင်လယ်ကွေ့ Crossing စီမံကိန်း Yalova အတွက်အိမ်ရာများ၏စျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်
အဆိုပါ Marmaray စီမံကိန်းကိုကဲ့သို့သောနှင့် Metrobus အိုးအိမ်စရိတ်အတွက် 75 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့
မျက်နှာကျက်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်းအိမ်ရာစျေးမှပြန်တမ်းခဲ့သည်
Beylikdüzü Metrobus လိုင်းAvcılar-ဧပြီလနောက်ဆုံးတော့ပွင့်လင်းလိမ့်မည်
Avcılar-Beylikdüzü Metrobus လိုင်းနောက်ဆုံးအဆင့်တွင် လာ. ,
Avcılar - Beylikdüzü Metrobus ပျက်ကျမှုကိုရပ်တန့်: ခရီးသည်သည်မြေတွင်းထဲသို့ပြုတ်ကျ!
Avcılar Metrobus တံတားပြိုကျအတွက်ကွန်ကရစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
Avcılar Metrobus ပြိုကျတံတားဖယ်ရှား
Avcılar-Beylikdüzü Metrobus လိုင်းအလံပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
အစာရှောင်ခြင်းရထားစိတ်အားထက်သန်စွာTorbalılıစောင့်ဆိုင်း beet လာသည်ဟု tile ကိုအလုပ်သီချင်းများ
Kadıköy-Kattal မြေအောက်ရထားစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှု, ရထားသူ့ကိုယ်ပိုင်လှည်းကိုနှိပ်ပါ
Metrobus Avcılarနှင့်Topkapı 1 ပတ်လမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်
Avcılar Metrobus အားကစားရုံ-Sogutlucesme (ဗီဒီယို)
တင်ဒါအသိပေးချက် - ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်ဖန်သားပြင်များကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည် (Avcılar - …